ဖေဖေလင်းရဲ့ သီချင်းတွေကို ဂစ်တာတီးပြီး အိုက်တင်အပြည့်နဲ့သီဆိုနေကြတဲ့ ခေတ်နဲ့သစ်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုမျှဝေလာတဲ့ချစ်သုဝေ – Askstyle
ဖေဖေလင်းရဲ့ သီချင်းတွေကို ဂစ်တာတီးပြီး အိုက်တင်အပြည့်နဲ့သီဆိုနေကြတဲ့ ခေတ်နဲ့သစ်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုမျှဝေလာတဲ့ချစ်သုဝေ
ခ်စ္သုေဝကေတာ့ ခ်စ္စရာေကာင္းျပီး လွပလြန္းသူတစ္ေယာက္ျဖစ္လုိ့ ပရိသတ္ေတြရဲ့ အခ်စ္ေတြကို အမ်ားၾကီးပိုင္ဆိုင္ထားရံုသာမက အိမ္ေထာင္က်ကံေကာင္းသူေလးတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်စ္သုေဝက သူမကို အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္နဲ့ ဂရုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ လင္းလင္းနဲ့ ခ်စ္စရာေကာင္းျပီး မိဘအေပၚ သိတတ္လိမၼာတဲ့ သမီးၾကီးေခတ္နဲ့ သမီးငယ္သစ္တို့ေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းတဲ့ မိသားစုဘဝေလးကို ပိုင္ဆိုင္ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီတစ္ေခါက္မွာလည္း ေခတ္နဲ့သစ္ေလးက ဂစ္တာေတြကိုယ္စီနဲ့ သီခ်င္းေတြ ေအာ္ဟစ္ဆိုေနၾကတာကို ေတြ့ရပါတယ္။ ခ်စ္သုေဝကေတာ့ ဂစ္တာေတြကိုယ္စီနဲ့ ေခတ္နဲ့ သစ္ရဲ့ ဗီဒီယိုေလးကို မွ်ေဝေပးရင္း “ကေလးေတြက guitar အရမ္းကို တီးတတ္ေနၿပီ.. အားက် သြားၾကပါသလား???” ဆိုျပီး သမီးနွစ္ေယာက္ကို ခ်စ္ၾကတဲ့ ပရိသတ္ေတြကို အရႊန္းေဖာက္စေနာက္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ၾကီးအတြက္ ေခတ္နဲ့သစ္ရဲ့ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ဗီဒီယိုေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
ေခတ္ေလးနဲ့ သစ္ေလးကေတာ့ ေဖေဖနဲ့ေမေမရဲ့ ဂီတေသြးေတြ အျပည့္အဝ စီးဆင္းေနျပီး သီခ်င္းဆိုတာ တူရိယာတီးမႈတ္တာေတြကို သေဘာက်နွစ္ျခိဳက္ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ၾကီးလည္း ေခတ္နဲ့သစ္ရဲ့ ဗီဒီယိုေလးကိုၾကည့္ျပီး သေဘာက်ေနၾကမယ္ ထင္ပါတယ္ေနာ္။ ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ Cele Connections ပရိသတ္ႀကီးအားလုံးလည္း သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။
ချစ်သုဝေကတော့ ချစ်စရာကောင်းပြီး လှပလွန်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို အများကြီးပိုင်ဆိုင်ထားရုံသာမက အိမ်ထောင်ကျကံကောင်းသူလေးတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သုဝေက သူမကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်တဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ လင်းလင်းနဲ့ ချစ်စရာကောင်းပြီး မိဘအပေါ် သိတတ်လိမ္မာတဲ့ သမီးကြီးခေတ်နဲ့ သမီးငယ်သစ်တို့ကြောင့် ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း ခေတ်နဲ့သစ်လေးက ဂစ်တာတွေကိုယ်စီနဲ့ သီချင်းတွေ အော်ဟစ်ဆိုနေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ချစ်သုဝေကတော့ ဂစ်တာတွေကိုယ်စီနဲ့ ခေတ်နဲ့ သစ်ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို မျှဝေပေးရင်း “ကလေးတွေက guitar အရမ်းကို တီးတတ်နေပြီ.. အားကျ သွားကြပါသလား???” ဆိုပြီး သမီးနှစ်ယောက်ကို ချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကို အရွှန်းဖောက်စနောက်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ခေတ်နဲ့သစ်ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ခေတ်လေးနဲ့ သစ်လေးကတော့ ဖေဖေနဲ့မေမေရဲ့ ဂီတသွေးတွေ အပြည့်အဝ စီးဆင်းနေပြီး သီချင်းဆိုတာ တူရိယာတီးမှုတ်တာတွေကို သဘောကျနှစ်ခြိုက်ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ခေတ်နဲ့သစ်ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီး သဘောကျနေကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။